Imifanekiso yeYunivesithi yase-Ohio State - Thatha iNtambo yeThoto
Iholide ye-Photo ye-Ohio State University
IYunivesithi yaseOhio State - iIyunivesithi
IYunivesithi yase-Ohio State University. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
IYunivesithi yase-Ohio State inehlukeneyo. Kuphakathi kweeyunivesithi eziphakamileyo ezikarhulumente kweli lizwe, kwaye abafundi abangama-55,000 ngenye yeeyunivesithi ezinkulu zelizwe. IiBuckeyes zihlala zihlula ngokwahlulo kwiCandelo le-NCAA I- Big Ten Conference . I-OSU inomxholo ocacileyo wokufunda: isikolo sinesahluko sePhi Beta Kappa ngenxa yamandla ayo kwezobugcisa kunye nobunzululwazi, kwaye ilungu loMbutho weeMerika zaseYurophu ngenxa yamandla alo kuphando. Ngeendleko kunye nedatha yokungeniswa, qi niseka ukutyelela iphrofayli yase - Ohio State University .
Iyokuyeka kuqala kwikhenketho ye-campus yiHolo yeYunivesithi, enye yezakhiwo zezakhiwo ze-OSU. Iyunivesithi yasungulwa ngowe-1870, kwaye kwakhiwa iHoloji yaseYunivesithi yasekuqaleni ngo-1871. Isakhiwo sokuqala sasivulela iiklasi ngo-1873. Ngowe-1971, iminyaka eyi-100 emva kokuqalwa kwakhiwa, iHolo yeYunivesithi yasekuqaleni yachithwa.
Ikholeji yaseYunivesithi yangoku ibukeka kakhulu njengeyakhiwo yasekuqaleni kwaye ihlala kwindawo efanayo kumgca we "Oval", ephakathi kwendawo eluhlaza. Intsha entsha yaseYunivesithi yaqala ukuhlala ngowe-1976. Namhlanje isakhiwo sikhaya kwiiprogram ezininzi kunye neofisi:
Amasebe aseAfrika-America kunye nama-Afrika
Isebe leZifundo zoBasetyhini
Amasebe aseGrike namaLatini
Iiofisi zolawulo zoBugcisa neNzululwazi, uLuntu, kunye neSikolweni seSikolo
I-Enarson Hall - i-Undergraduate Admissions
I-Enarson Hall kunye ne-Ofisi ye-Undergraduate Admissions kwi-University of Ohio. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
I-Enarson Hall isakhiwo esixakekileyo kwiYunivesithi yase-Ohio State. Ingaba ungumhlali wase-United States okanye umfaki sicelo wehlabathi, zonke izivakalisi zezifundo zakudala zilandelwa ku-Enarson. Isakhiwo siyindlu yeeNkonzo zobhaliso, i-Undergraduate Admissions, kunye ne-International Undergraduate Admissions.
I-Enerson Hall iya kubaluleka kubafundi emva kokuba babhalise kwi-OSU - isakhiwo sihlala kwi-Experience ye-First Year Experience (FYE). I-FYE iyinto eyahlukileyo kakhulu kwiikholeji nganye, kwaye kwi-Ohio State u-I-Experience ye-First Year iquka uluhlu lweenkqubo ezijoliswe ekuncedeni abafundi ukuba balungele ubomi kwi-OSU, badibanise neyunivesiti, baphumelele kwizifundo.
Ukuqanjwa kwakhona emva koMongameli we-OSU uHarold L. Enarson, isakhiwo saqala ukusetyenziswa ngo-1911 kwaye saqala ukukhonza njengomanyano womfundi.
I-Fisher Hall kunye neFisher College yezoRhwebo
I-Fisher Hall kunye neFisher College yezoRhwebo. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
IYunivesithi yase-Ohio State yeFisher College yezoRhwebo ifumaneke kwiFisher Hall entsha. Isakhiwo sezitezi ezilishumi sagqitywa ngo-1998 kwaye sabizwa ngokuba nguMax M. Fisher, isikolo se-OSU College of Business. UMnu Fisher wanikela iidola ezingama-20 kwiyunivesithi.
Kwiindaba ze -2011 ze- US kunye neNgxelo yehlabathi , i-College ye-Fisher College yeBusiness ibekwe kwisiqingatha se-14 phakathi kwazo zonke iiprogram zezobugcisa kwi-United States. Ikholeji i-14 ye-accounting, ye-11 yezemali, ye-16 yokulawula kunye ne-13 yokuthengisa. Imali kunye nokuthengisa zimbini zezona zifundo ezidumileyo ze-grade-grade, kwaye i-Fisher College nayo inesiseko se-MBA.
I-Scott Laboratory kwi-University of Ohio
I-Scott Laboratory kwi-University of Ohio. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Isakhiwo esithakazelisayo sibona iScott Laboratory, i-$ 72.5 yezigidi eziyinkimbinkimbi ezisekhaya kwiSebe leMechanical kunye ne-Aerospace Engineering kwi-University of Ohio. Isakhiwo sokuqala sivuliwe ngo-2006 kunye nezindlu zamagumbi okufundela, ii-labor lab, i-faculty kunye nabasebenzi, ii-laboratory, kunye ne-shop shop.
Kwiminyaka ye-2011 yeendaba ze-US ne-World Report yeeKholeji, isikolo sobunjineli sase-Ohio State sibeke i-26 phakathi kwamaziko onke ase-US anika iidriji zoogqirha yobunjineli. Ubunjineli bombane kunye nobunjineli basetyenziswa kakhulu kwizikolo zakudala.
I-Fontana Laboratories - IiNzululwazi zoLwazi kwi-OSU
I-Fontana Laboratories kwiYunivesithi yaseOhio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Njengesixhobo esiphambili sezesayensi, ndakufuneka ndifake i-Fontana Laboratories kwindlela yokutyelela ifoto. I-Fontana Laboratories, eyayibizwa ngokuthi yiZakhiwo zobunjineli beMetallurgical, enye yezakhiwo eziliqela ezisetyenziswe yiSebe leZakhiwo zezeNzululwazi kunye nobunjineli kwiYunivesithi yaseOhio State.
KwiiNdaba ze-2011 ze- US kunye ne-World Report yeKholeji, i-Ohio State ibekwe kwisi-16 kwizinto zesayensi. Phakathi kwezifundo zokugqibela, izixhobo zesayensi asithandwa njengamanye amaninzi obunjineli kwi-OSU, kodwa abafundi abafanele bahlale bekhumbula ukuba inkqubo encinci iya kubakho iiklasi ezincinci eziphezulu kunye namathuba angaphezulu okuphanda.
Ohio Stadium kwiYunivesithi yaseOhio State
Ukuba uthanda injabulo yeCandelo I-Athletics, i-Ohio State University iyona nto ikhethekileyo. I-Ohio State Buckeyes incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Big Ten Conference .
I-Ohio Stadium ineembali ende kunye nezityebi eziye zazinikezelwa ngo-1922. Xa idizayithi yahlonywa ngo-2001, isakhono sayo sanyuka saba ngaphezu kwezihlalo eziyi-100 000. Iimidlalo zasemakhaya zidweba izihlwele ezininzi, kwaye abafundi banokufumana ukuhamba kwexesha lebhola malunga ne-1/3 kwindleko ebantwini jikelele.
Iziko leSayensi yeCognitive kunye ne-OSU Marching Band nayo ihlala kwi-Ohio Stadium.
I-Mirror Ichibi eYunivesithi yase-Ohio State
I-Mirror Ichibi eYunivesithi yase-Ohio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Ukuze iqhutywe ngokuqhubekayo eyunivesithi yabafundi abangaphezulu kwama-50,000, iYunivesithi yase-Ohio State yenza umsebenzi oqaqambileyo wokulondoloza izikhala eziluhlaza kwi-campus. I-Mirror Ichibi lihleli kwinqona elantsi-ntshona ye "Oval" - i-OSU eluhlaza okomkhulu. Ngexesha leveki yaseMigan yaseMichigan, usenokufumana isiqendu sabafundi bexhamla emanzini anqabileyo echibi.
Kulo mfa nekiso, iHolo lasePomerene (ngasekhohlo) kunye neCampbell Hall (ngasekunene) inokubonwa kwicala elikude lechibi. I-Pomerene yayisisiseko "seZindlu zaBasetyhini," kwaye namhlanje isetyenziswe yi-Ofisi yoBomi beBafundi. ICampbell iyisakhiwo esiyimfundo esinezindlu ezininzi kwiKholeji yeMfundo kunye ne-Ecology. Uza kufumana i-Costume ye-Costume ne-Textile Collection e-Campbell.
Iholo laseDrinko - I-Moritz College of Law ku-OSU
Iholo laseDrinko - I-Moritz College of Law kwiYunivesithi yase-Ohio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Eyakhelwe ngo-1956 kwaye yanda kakhulu kwi-1990, iDorinko Hall isentliziyweni ye-Ohio State University yaseMoritz College of Law. Ngo-2010, iKholeji yoMthetho kaMoritz ibekwe kwi-34 kwi- US News & World Report , kwaye i-OSU ibika ukuba iklasi lika-2007 linomlinganiselo we-placements ka-98.5%. Ngo-2008-2009, abafundi abayi-234 abaphumelele ekutholeni i-degrees yomthetho kwi-University of Ohio.
ITrabby Thompson kwi-OSU
Library Library kwi-University of Ohio. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Eyakhelwe ngo-1912, iThalayibhrari yakwaT Thompson iyindawo ebalulekileyo ekupheleni kwe "I-Oval," i-OSU eluhlaza obukhulu. Ngo-2009, ukwandiswa kunye nokuvuselelwa kweelayibrari kwagqitywa. I-Library yaseT Thompson iyona inkulu kwi-yunivesithi yombuso, kwaye isakhiwo sinezihlalo zabafundi abayi-1,800 ukufunda. Igumbi lokufunda kwisigaba se-11 sinemibono emangalisayo yekampus kunye neColumbus, kwaye igumbi lokufunda eliphambili kumgangatho wesi-2 lijongene ne-Oval.
Ezinye iinkalo zeThalabhu yeT Thompson ziquka i-cafe, ukufikelela kwe-intanethi, amakhulu amakhompiyutha karhulumente, amagumbi okufunda okuthulekileyo, kwaye, ngokuqinisekileyo, i-electronics and printing holdings.
UDenney Hall kwiYunivesithi yaseOhio State
UDenney Hall kwiYunivesithi yaseOhio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
UDenney Hall uphaya kwiSebe leNgesi. IsiNgesi ngabantu abathandwa kakhulu kwiYunivesithi yaseOhio State (elandelwa yimbali), kwaye kunyaka wezifundo zango-2008-09, abafundi abangama-279 bagqiba i-bachelor degrees ngesiNgesi. I-OSU inayo iiprogram ze-master and doctoral degree in English.
UDenney Hall uhlala neofisi yezoBugcisa kunye neNzululwazi yeeNzululwazi kunye neeNkonzo zeMfundo. Njengamanyunivesithi amakhulu amaninzi, i-OSU isiluleko sezemfundo ilawulwa ngamaofisi asekuhlaleni abasebenza ngabacebisi beengcali ezizeleyo (kwiikholeji ezincinci, abacebisi besikhundla abaqhelekileyo). Iofisi isebenza ngemiba enxulumene nokubhaliswa, ukucwangciswa, iimfuno eziqhelekileyo zemfundo, iimfuno ezinkulu kunye neemfuno ezincinane, kunye neemfuno zokugqweswa.
I-Taylor Tower kwiYunivesithi yaseOhio State
I-Taylor Tower kwiYunivesithi yaseOhio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
I-Taylor Tower yenye yeehholo ezingama-38 zokuhlala kwi-University of Ohio State University. Isakhiwo esineziitalathu ezilishumi elinamithathu, njengeendibano ezininzi zokuhlala, sinegumbi lesigxina, intanethi ye-intanethi, ikhebula, izixhobo zesekhishini, indawo zokufunda, igumbi lebhayisikili, umoya womoya kunye nezinye izinto eziphathekayo. I-Ohio State ineendawo zokuhlala kunye nokufunda, kunye neT Taylor Tower yindawo yokufunda imimandla ehambelana ne-Honors, Business Honors, kunye ne-Allied for Different.
Zonke iiholo zokuhlala zaseyunivesithi zineeyure ezithule ziqala ukususela nge-9 ukuya ku-7 ngeCawa ukuya ngoLwesine. NgoLwesihlanu nakwiMigqibelo, iiyure ezithulileyo ziqala ngo-1 ekuseni i-OSU inekhowudi yokuziphatha ecacileyo kwiiholo zokuhlala ezijongene nokusetyenziswa kotywala, iziyobisi, ukutshaya, ukutshabalalisa, ingxolo kunye neminye imiba.
U-Knowlton Hall kwiYunivesithi yase-Ohio State
U-Knowlton Hall kwiYunivesithi yase-Ohio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Ukuqulunqwa kwe-Knowlton Hall kuyafaneleka - isakhiwo sikhaya kwi-Ohio State ka-Austin E. Knowlton School of Architecture kunye neLibrari ye-Architecture. Eyakhelwe ngo-2004, u-Knowlton Hall uhleli ecaleni lasentshonalanga kwikampus kufuphi ne-Ohio Stadium.
Iiprogram zezobugcisa zakwa-Ohio State ziphunyezwe malunga nabafundi be-bachelor 100 ngonyaka, kunye nabafundi abancinci beenkosi. Ukuba unomdla ekuqhubekeni kwinqanaba lezakhiwo, qiniseka ukuba ufunde okungakumbi kwi-Jackie Craven, Guide ye-About.com kwi-Architecture. Inqaku lakhe ekukhetheni isikolo sokwakha indawo yindawo efanelekileyo yokuqala.
Isiko se-Wexner soBugcisa kwiYunivesithi yase-Ohio State
Isiko se-Wexner soBugcisa kwiYunivesithi yase-Ohio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Eyakhelwe ngo-1989, i-Wexner Centre yezoBugcisa ibalulekileyo kwimpilo yenkcubeko e-Ohio State. I-Wexner Centre inikezela uluhlu olubanzi lweemiboniso, iifilimu, iintsebenzo, iiworkshops kunye nezinye iinkqubo. Iziko linama-square angama-13,000 weenyawo zendawo yokubonisa, i-movie showater, "ibhokisi elimnyama" yeshayibrari, kunye ne-studio yevidiyo. Enye yezinto eziphambili kwiziko ziyi-Mershon Auditorium ezihlala ngabantu abayi-2 500. Abafundi abanomdla kwifilimu, umdaniso, umculo kunye nendawo yokudlala izakuhlala zihlala rhoqo kwiziko le-Wexner.
I-Wexner iphinda ihlalise iLibrari yobuGcisa boBugcisa kunye neLibrari yeBilly Ireland neMusic Museum.
I-Kuhn Honors & Scholars House kwi-OSU
Kuhn Honors & Scholars House e-Ohio State University. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
I-Kuhn Honors & Scholars House kunye ne-Browning Amphitheater yakhiwe ngowe-1926. Izakhiwo zineendawo ezinokumongamela kwi-Mirror Lake kunye ne-Oval.
Inkqubo ye-Honors Programme kunye neCheckers Programme zifaneleke ukuba zijongwa ngokufutshane nawaphi na abafundi abafuna uhlobo oluthile lokufunda kunye nolwazi olunzulu nolunokuba lunzima ukufumana kwiyunivesithi kunye nabafundi abangaphezu kwama-40 000. Bobabini ngabafundi abaphumelele kakhulu. Iprogram ye-Honours isimemo-kuphela, kwaye ukhetho lusekelwe kwisikhundla seklasi esikolweni esiphakamileyo kunye neemvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo. Iprogram yeeScholars inesicelo esahlukileyo. Iiplani zeNkqubo ye-Honours ziquka iiklasi ezizodwa kunye namathuba okuphanda, ngelixa i-Programme yoBuchule igxininisa ukuhlala okukhethekileyo nokufunda uluntu kwi-campus.
I-Browning Amphitheatre isetyenziselwa udidi lweenkqubo zangaphandle.
I-Ohio Union kwiYunivesithi yaseOhio State
I-Ohio Union kwiYunivesithi yaseOhio State. Ikhredithi yezithombe: uJuliana Gray
Efumaneka kwimpuma yempuma ye-Oval, i-OSU yase-Ohio Union yenye yezinto ezitsha ezongezelelweyo kwi-campus kunye neziko lokuphila komfundi. Isakhiwo seenyawo ezingama-318,000 saqala ukuvula iingcango zayo ngo-2010. Isakhiwo sezigidi eziyi-118 sisekelwa inxalenye yerhafu yemali ehlawulwa ngabo bonke abafundi be-OSU.
Isakhiwo sinebhola lebhola elincinci, iholo yokusebenza, indawo yokudlala, amaninzi emagumbi okuhlangana, iiofisi zombutho wezemfundo, ii-lounges kunye neendawo ezininzi zokutya.
Ngubani UYesu, Ngokwenene?
Ukuqonda iNyunithi yeMilo yeMilinganiselo
Ukutshatyalaliswa kweMidlalo yeThuthi yaseBrithani
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseSteler's Creek
Isingeniso kuLwimi lweDelphi
UCatherine waseAragon - Ubomi bokuqala noMtshato wokuqala
Yintoni I-Acid Mine Mine?
Yintoni Ubunzima beManzi?
Isikhokelo kuMculo weRiphabhliki yaseDominican